AH: ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စစ်သမီးများ သို့ အမျိုးသမီးစစ်သည်များ
အင်း..... ဒီပိုစ့်တင်လိုက်ရင် မိန်းမနဲ့ ရန်ဖြစ်တော့မယ်မှန်းသိပေမယ့် အများသူငါ ကြည့်ရှု့စေရန်အလို့ငှာ ပိုစ့်တင်လိုက်ပါသည် :)
Ref : (Link 1, Link 2, Link3)
Posted by AH at 10/20/2011 02:39:00 PM
စံပယ်ချို October 20, 2011 at 4:26 PM
အိမ်မှာအိပ်လို့ AH အမျိုးသမီးကမပြောဘူးလား....
မဒမ်ကိုး October 20, 2011 at 4:39 PM
ဒီမယ် ကိုအားထောင် ..ကိုရင်မမြင်ပါစေနဲ့ လင်မယားသတ်နေရမယ် ခုတောင် နောင်ဂျိမ်ဖို့တာစူနေတာနော်း)
ဒါဘဲ ..ဟဲဟဲ (တခုတော့ပြောလိုက်မယ်နော် )
ရွှေဒိုးတို့ အမျိူးသမီးစစ်သည်လုပ်ရင် အဲဒါတွေထက်ပိုမိုက်မှာ
မမဂျက်တို့ ပစ်ပစ်တို့ မိုးငွေ့ မမချော. မိုးခါး ဒါတွေကိုသာအဲဒါဝတ်ပေးလိုက်စမ်းပါလေး)မယုံမရှိနဲ့နော်း)
AH October 20, 2011 at 5:14 PM
ပန်းကန်တွေ အိုးခွက်တွေက မီးဖိုချောင်မှာတဲ့ မဂျက်စ်ရဲ့ အိပ်ယာထဲမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့... :P
ကိုရင်ရေ... ဖတ်တော့ဖတ်....မမန့်နဲ့နော်.... မဒမ်က တာစူနေသတဲ့ ကိုရင်ရဲ့။ ဟီး ဟီး
Q-te October 20, 2011 at 8:00 PM
စစ်သမီးလုပ်ခွင့်ရှိလဲ နာ စိတ် နဲ့ နာ့ နိုင်ငံမှာဆိုရင် နာ ကျစ် သတ်လို့ ယောကျာင်္တွေကို ရှားပါးလူသားအဖြစ် ထိုင်ကြည့်နေရမှာ သေချာလယ် ငှဲငှဲ
AH October 20, 2011 at 8:02 PM
ဘုရား ဘုရား နိုင်ငံတော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.... မဟုတ်ရင် မကျူတီလက်ချက်နဲ့ မလွယ်လှဘူး.... ဟီး ဟီး :P
Pa Lwe Yoe October 21, 2011 at 12:52 PM
Estonia, Serbia, UK, Ukraine, Polan, S korea...
အဲဒါ မျိူး စစ်သမီး တွေ နဲ. တိုက် ချင် တယ်.... LAR SAN BAR...HINN HINN HINN...